အိမ်ရာ မဝယ်နိုင်သည့် ပြည်သူများနှင့် ဝန်ထမ်းများကို ငါးနှစ်အထိ ငှားမည့် အငှားအိမ်ရာစနစ်ေ?? - Yangon Media Group
အိမ်ရာမဝယ်နိုင်သည့် ပြည်သူများနှင့်ဝန်ထမ်းများကို ငါးနှစ်အထိငှားမည့် အငှားအိမ်ရာစနစ်ဖော် ဆောင်မည်ဟု စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းက ပြောကြားသည်။ မတ် ၆ ရက် ဒုတိယအကြိမ် ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အိမ်ရာဖွံ့ ဖြိုးရေးစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဂျိုက်ကာမှ ဂျပန်ယန်း ၁၅ ဘီလီယံချေးယူရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဆွေးနွေးမှုကို ဝန်ကြီးဌာနက ပြန်လည်ရှင်းလင်းရာ ယင်းသို့ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။
ဂျပန်ယန်း ၁၅ ဘီလီယံချေးယူပြီး တန်းဖိုးနည်းအိမ်ရာ၊ တန်ဖိုးသင့်အိမ်ရာများကို ရန်ကုန်အပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အချို့တွင် တည်ဆောက်ပြီး ပြည်သူများဝယ်ယူနိုင်ရေး ဆောင်ရွက် မည့်အစီအစဉ်အပြင် ဝင်ငွေနည်းပြည်သူများနှင့် ဝန်ထမ်းများအတွက်လည်း အငှားအိမ်ရာစနစ်များ ဖော်ဆောင်ရန် လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဆွေးနွေးမှုများရှိ ခဲ့သည်။ ယင်းအပေါ် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာ ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးက”အိမ်ရာလုံးဝမဝယ်ယူနိုင်သည့် ပြည်သူများ၊ ဝန်ထမ်းများအတွက် အငှားအိမ်ရာစနစ် ဖြင့် အများဆုံးငါးနှစ်အထိငှားပေးမည့် အစီအစဉ်ရှိပြီး ငှားရမ်းခများကိုလည်း သင့်တော်သောနှုန်းထားဖြင့် သတ်မှတ် ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါးနှစ် ပြည့်ပါက အငှားအိမ်ရာမှ အရောင်း အိမ် ရာသို့ပြောင်းရွှေ့ဝယ်ယူနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ယခင်အစိုးရလက်ထက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒဂုံတောင်မြို့နယ်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ၏အစီအစဉ်ဖြင့် စတုရန်းပေ ၆ဝဝ ခန့် ကျယ်ဝန်းပြီး အခန်းပေါင်း ၁၂ဝဝ ပါဝင်သည့် ဗန္ဓုလအငှားအိမ်ရာစီမံကိန်းကို တည်ဆောက်ကာ အခန်းတစ်ခန်းလျှင် ကျပ်သုံးသောင်းနှုန်းဖြင့် ငှားရမ်းမှုပေးခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းအချိန်က အဆိုပါအခန်းပေါင်း ၁၂ဝဝ အတွက် လျှောက်ထားသူများစွာ ရှိခဲ့သဖြင့် မဲနှိုက်သည့်စနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ရကြောင်း၊ ရန်ကုန်မြိုနေ လူဦးရေထက် ဝက်ကျော်မှာ အိမ်ရာပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘဲ နှစ်စဉ်တိုးမြင့်လာနေသော အိမ်၊ အခန်းငှားခများဖြင့် ရုန်းကန်နေကြရကြောင်း သိရသည်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင် အငှား အိမ်ရာစနစ်အား ဖော်ဆောင်လျက်ရှိပြီး မိသားစုအစဉ်အဆက် နေထိုင်မှုမျိုးမဖြစ် စေရန်နှင့် ကျန်လိုအပ်ချက်ရှိသူများကို ငှားရမ်းနိုင်ရန်၊ ဖယ်ရှားရန်ခက်ခဲမှုကိုဖြေ ရှင်းရန်အတွက် အငှားအိမ်ရာသက်တမ်းကို ငါးနှစ်သာသတ်မှတ်ထားကြောင်း သိရသည်။
ချင်းပြည်နယ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိရေးအတွက် ငွေကျပ်သန်းပေါင်း တစ်သောင်းကျော် အသုံးပြုဆောင်?
ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ပဲပြန်သွင်းခွင့် သတင်းထွက်ပေါ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကုန်စည်ဒိုင်များက ပြန်လည်စိစစ်ပေးရန် တင်ပြထား